REVIEW ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ခဲ့မိတာကြောင့် ၎င်းကုမ္ပဏီမှ သူမ နဲ့ လုံးဝပတ်သက်မှု မရှိကြောင်းတုန့်ပြန်ခဲ့ လို့ အရှက်တွေကွဲခဲ့ရ တဲ့ နေခြည်ဦး – Shwe Yoe
ပရိသတ်ကြီးရေ နေခြည်ဦးကတော့ အခုကာလမှာ ပရိသတ်တွေ ဝိုင်းပြီး social Punishment လုပ်ထားတာ ကြောင့်Facebook တောင် မသုံးရဲဘဲ Instagram မှာပဲ သူ့ရဲ့တစ်နေ့တာအကြောင်းတွေကို တင်နေရပါတယ်နော်။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ရက်လောက်ကလည်း အလှကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု review ရေးခဲ့တဲ့ အတွက် ပရိသတ်များမှ နေခြည်ဦးတင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကို မဝယ်ကြဖို့ တင်နေကြပါတယ်နော်။ ဒီအဖြစ်တွေကို သိသွားတဲ့ ကုမ္ပဏီမှ နေခြည်ဦးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်နော်။
” ⚠️ 𝐀𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 ⚠️ယခု social media ပေါ်တွင် ပြန့်နှံ့လျှက်ရှိသောနေခြည်ဦးနှင့်သူ၏ Instagram Story တွင်ကြော်ငြာထားသောWonder Bath Brand သည်နေခြည်ဦးနှင့်အတူမည်သည့်အခါကမှလက်တွဲလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါကြောင်းနှင့် မလိုလားအပ်သောပြသနာများပေါ်ပေါက်လာမည်ကို မလိုလားသောကြောင့် Wonder Bath customer များအား အထူးလေးစားစွာအသိပေးအပ်ပါသည်။ နောက်နောင်တွင်လည်း သူမနှင့်လက်တွဲလုပ်ကိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းအတိအလင်းကြေငြာအပ်ပါသည်… ယခုဖြစ်ရပ်သည်လဲသူမ၏စိတ်သဘောထားဖြင့်သာပြုလုပ်ချင်းဖြစ်ပြီး Wonder Bath Myanmar နှင့်မသက်ဆိုင်ပါကြောင်းအသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်
Wonder Bath Myanmar နှင့်လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူများမှာ1. Kelvin2. Yayy Yayy3. Carrieတို့နှင့်သာလက်တွဲ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၁ မှစ၍မည့်သည့် celebrity များနှင့် Activity များပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါကြောင်း…ပြည်သူနဲ့အမြဲရပ်တည်လျက် 𝐖𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐁𝐚𝐭𝐡 𝐌𝐲𝐚𝐧𝐦𝐚𝐫 ” လို့ ကုမ္ပဏီ Page တွင် တင်လာပါတယ်နော်။
ပရိသတ်ကြီးရေ နျေခည်ဦးကေတာ့ အခုကာလမွာ ပရိသတ်တြေ ဝိုင်းပြီး social Punishment လုပ္ထားတာ ကြောင့်Facebook တောင် မသုံးရဲဘဲ Instagram မွာပဲ သူ့ရဲ့တစ်နေ့တာအေကြာင်းတြေကို တင်နေရပါတယ်နော်။ လြန္ခဲ့တဲ့တစ်ရက်လောက္ကလည်း အလွကုန္ပစ္စည်းတစ္ခု review ရေးခဲ့တဲ့ အတြက် ပရိသတ္မ်ားမွ နျေခည်ဦးတင္ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတြေကို မဝယ်ကြဖို့ တင်နေကြပါတယ်နော်။ ဒီအျဖစ်တြေကို သိသြားတဲ့ ကုမ္ပဏီမွ နျေခည်ဦးနဲ့ ပတ်သက္တဲ့ျေဖရွင်းခ်က္တစ္ခု ထုတ်ျပန္လာခဲ့ပါတယ်နော်။
” ⚠️ 𝐀𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 ⚠️ယခု social media ပေါ်တြင်ျပန့်နွံ့လ်ွက်ရွိသောနျေခည်ဦးနွင့်သူ၏ Instagram Story တြင်ကြော်ျငာထားသောWonder Bath Brand သည်နျေခည်ဦးနွင့်အတူမည်သည့်အခါကမွလက္တြဲလုပ္ကိုင်ျခင်းမရွိခဲ့ပါကြောင်းနွင့် မလိုလားအပ်သျောပသနာမ်ားပေါ်ပေါက္လာမည္ကို မလိုလားသောကြောင့် Wonder Bath customer မ်ားအား အထူးလေးစားစြာအသိပေးအပ္ပါသည်။ နောက်နောင္တြင္လည်း သူမနွင့်လက္တြဲလုပ္ကိုင္မည္မဟုတ်ကြောင်းအတိအလင်းကျြေငာအပ္ပါသည်… ယချုဖစ်ရပ်သည္လဲသူမ၏စိတ်သေဘာထာျးဖင့်သျာပုလုပ္ခ်င်ျးဖစ်ပြီး Wonder Bath Myanmar နွင့်မသက္ဆိုင္ပါကြောင်းအသိပေးအေကြာင်းကြားအပ္ပါသည်
Wonder Bath Myanmar နွင့်လက္တြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသူမ်ားမွာ1. Kelvin2. Yayy Yayy3. Carrieတို့နွင့်သာလက္တြဲ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပြီး ဖေဖ်ာဝါရီလ ၂၀၂၁ မွစ၍မည့်သည့် celebrity မ်ားနွင့် Activity မ်ာျးပုလုပ္ချဲ့ခင်းမရွိခဲ့ပါကြောင်း…ျပည်သူနဲ့အမြဲရပ္တည္လ်က် 𝐖𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐁𝐚𝐭𝐡 𝐌𝐲𝐚𝐧𝐦𝐚𝐫 ” လို့ ကုမ္ပဏီ Page တြင် တင္လာပါတယ်နော်။
စကပ်တို ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ပိုစ့်ပေးနေတဲ့ သန္တာဗိုလ် ရဲ့ ပုံရိပ်လေး များ